Yi 1080p Home Igwefoto nyochaa, onyunyo igwefoto ị na-achọ | Akụkọ akụrụngwa
Yi 1080p Home Igwefoto Review
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa, Home, Nyocha, Camcorders
Abọchị ole na ole anyị enweela obi ụtọ ịnwale ngwaahịa ọzọ sitere na ezinụlọ YI. A Xiaomi nke ika ya bu oru nke mmepe nke ngwaahịa ndi metụtara ndekọ ya na usoro ya nile. Oge a anyị na-ekwu maka YI 1080p Igwefoto ulo.
Anyị anaghị eche ihu kamera igwefoto, dị anya na ya. Igwefoto ụlọ nke Yi nwere wifi njikọta na mkpebi 1080p. Ngwa na na-enye anyị ọtụtụ ọnụọgụ ụlọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere Igwe Igwe Igwe Igwe Yi, gaa n'ihu na-agụ.
1 Igwe Igwe Igwe Yi, otu igwefoto, ọtụtụ ohere
2 Yi Home Igwefoto Unboxing
3 Minimalist na arụmọrụ imewe
4 Njirimara Igwe Igwe N'ulo a
5 Real-oge video ma ọ bụ ihe oyiyi na ndekọ
6 Onwe ngwa maka Yi Home Camera
7 Uru na ọghọm nke Igwefoto Yilọ Yi
Igwe Igwe Igwe Yi, otu igwefoto, ọtụtụ ohere
Ihe na - apụta ìhè mgbe anyị wepụtara igwefoto n’ime igbe ya bụ àgwà nke ihe ya na ihe magburu onwe ya risịrị. Ngwaahịa nke gosipụtara anya na anya ma metụ aka. Anyị enweela ihu ọma ịnwale ngwaahịa ndị ọzọ nke Yi, anyị nwere ike ikwu nke ahụ n'ụzọ zuru ezu izute a elu mma ọkọlọtọ. Ebe i nwere ike ịzụta Yi Home Igwefoto na Amazon na mbupu n'efu.
Tụrụ ime, na mbido dị ka igwefoto onyunyo nyere atụmatụ nke ọ kwadebere. Otu nke anyị nwere ike ịkọwapụta nke ndị ọhụụ abalị ma ọ bụ mkpọtụ ụda. Ma gịnị na-ezute n'ụzọ magburu onwe ya maka ogbako vidiyo ekele 1080p oyiyi mma na ụzọ abụọ ọdịyo. Atụmatụ ndị anyị ga-atụle n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
Achọpụtaghị ahụ Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Iyi. Ha eriri ederede na nhọrọ nke agba na ihe dị ezigbo mma. Ngwa nke na-agaghị ese okwu n'akụkụ ọ bụla, na nke a agaghị achọpụta ya. Na a ahụ na isi mere nke na-eguzogide ọgwụ plastic na Mat ọcha na agba, ebe a okirikiri modul na-egbu maramara nwa ebe oghere dị.
Yi Home Igwefoto Unboxing
Oge erugo ileba anya n’ime igbe ahụ gwa gị ihe niile anyị hụrụ. Na nke mbụ, igwefoto n'onwe ya, nke, dị ka anyị na-ekwu, dị mma nke ukwuu n'anya na imetụ aka. Na mgbakwunye, anyị nwere USB na Micro USB usoro USB. Na ibu transformer, ihe nke ọ bụghị ndị nrụpụta niile gụnyere na igbe.
Ekele maka njikọ Wi-Fi, eriri ya na njikọ njikọta, na Igwefoto Yilọ Yi adịghị mkpa ijikọ na kọmpụta ọ bụla. Anyị nwere ike ịchọta ya ebe ọ bụla Wi-Fi na-egosi. Eriri nke nwere ike ịkwụsị ọnọdụ gị na nso ikpere.
Na mgbakwunye, n'ime igbe anyị hụrụ a ndu zuru oke nke gunyere ngalaba na Spanish. Akwụkwọ ikike akwụkwọ ikike, akwụkwọ mmado na obere onyinye nkwado. Mgbe ị na-azụ igwefoto a, Yi na-enye anyị a nkwado koodu na QR code format na nke anyị ga-enweta a 33% ego na ndekọ na ọrụ nchekwa na Igwe ojii.
Minimalist na arụmọrụ imewe
Dị ka anyị na-agwa gị, atụmatụ nke Igwefoto Igwe Igwe Yi, anyị hụrụ ya n'anya. Anyị adịghị ahụ ihe ọ bụla fọdụrụnụ, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla anyị na-achọ. Na igwefoto ahụ na isi ya n'onwe ya dị ezigbo njọ. Nkọwapụta nke na-eme ya dị nnọọ arọ dị arọ yana ọgụgụ isi karịa jiri ya tụnyere igwefoto dị elu.
Na isi ya o nwere mgbatị na-agbagharị (laghachi na-apụta) na mfe gafere ogo 180. Ya mere, anyị nwere ike idowe ya na ntọala ya, maọbụ ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na mgbidi ma ọ bụ n'akụkụ ọzọ adịghị agbanwe agbanwe. Iji mee nke a, ala nke ekpuchie ya isi na roba na-enweghị amị amị.
Na azụ anyị na-ahụ modul, na-na nwa, ebe ikike mgbapụta. Anyị nwere ike ijikọ eriri ọ bụla na usoro Micro USB. Anyị na-achọta nkọwa nke na-eme Yi Igwefoto Igwe ụlọ ka ọ gbasaa ohere ya; a Micro SD kaadị ebe nchekwa. Na Tọgharia bọtịnụ iji wepu ntọala ọ bụla.
Herezụta ebe a Igwefoto Igwe nke Yi na Amazon na mbupu n'efu na mbelata 10%.
Njirimara Igwe Igwe N'ulo a
Njirimara anụ ahụ nke Igwe Igwe Igwe Yi na-eme ya igwefoto iji mee ihe n'ime ụlọ. Ọ bụ ezie na ekele maka njikọ Wi-Fi ya anyị nwere ike ịchọta ya ebe ọ bụla anyị nwere ikike ọkụ. Ọ kwadebeghị iji gbochie ojiji "n'ọnụ ụzọ". N'agbanyeghị nke ahụ, ọ kwadebere ya otu atụmatụ dị ka igwefoto onyunyo n'èzí.
Aka na n’abali anaghị emerụ mmadụ. Nke a pụtara na ịkwesighi ịgbanye ọkụ ọ bụla iji “hụ” ka ịghara ịmụrụ gị ma ọ bụ ọkụ achọghị n'ọchịchịrị ga-enye gị nsogbu. Na teknụzụ infrared na-eme ka anyị nweta ihe onyonyo doro anya n'ọchịchịrị juputara na ebe etinyere ya.
Ọzọ nke mgbakwunye, nke na-agbasawanye ohere ya bụ ịchọpụta ngagharị. Igwefoto nwere ike ibu oru na na-arụ ọrụ na akpaghị aka mgbe ihe mmetụta ya chọtara mmegharị. Ha ga-emekwa otu ihe ahụ mgbe achọpụtara ụda / mkpọtụ ụfọdụ. Ekele maka nke a anyị nwere ike iji ya maka nyocha ụlọ ma ọ bụ dị ka nlekọta nwa.
N'ihi nhọrọ ndị software gị na-enye Anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti ịnata ọkwa ugbu a site na ịdọ aka ná ntị site na ngwa n'onwe ya. Ma ọ bụ na anyị nwere ike hazie ya na, ọ bụrụ na igwefoto na-arụ ọrụ site na mmegharị ma ọ bụ mkpọtụ, anyị na-enweta ozi email. Naanị na eriri USB na njikọ Wi-Fi, anyị nwere ike ịpụ n’ụlọ n’udo ekele na nyocha a na-egbochi igbochi nke Igwefoto Igwe Igwe Yi.
Real-oge video ma ọ bụ ihe oyiyi na ndekọ
Anyị nwere dị iche iche ojiji nhọrọ maka Igwefoto Igwe Igwe. Ya Wi-Fi njikọ na a zuru ngwa na anyị ga-ekwu okwu banyere, ka anyị nwere ike ịnweta ihe oyiyi na ozugbo site na ebe ọ bụla. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịmekọrịta site na igwefoto na ebe ọ bụla, ekele ya bidirectional ụda. Maka nke a anyị nwere ọkà okwu na igwe okwu, ihe na-adịghị niile nwere.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ oyiyi ndekọ, Igwe Igwe Igwe Igwe Yi dịkwa mma maka nke a. Anyị na-achọta ụzọ abụọ maka ndekọ ederede. Anyị nwere ike iji oghere gị Micro SD ịchekwa ihe oyiyi. Ma ọ bụ anyị nwere ike iji nke igwe ojii nchekwa usoro ihe ọrụ ahụ na-enye anyị Yi Cloud.
Su oghere oghere dị obosara Ọ na-emesi anyị obi ike na, ọ bụrụ na anyị enwee ọnọdụ dị mma iji lebara anya, anyị nwere ike ikpuchi ọnụ ụlọ ma ọ bụ ogige ụlọ kpamkpam. Ma nwee ihe oyiyi e dere na 1080 HD mma mee ya ihe nlere onyunyo. Karịsịa, n'ime aka niile. A ọma nche usoro adịghị na-eri a uba, ebe a ị nwere ike nweta Yi Igwefoto Homelọ gị na Amazon na-enweghị ebubo mbupu.
Onwe ngwa maka Yi Home Camera
Developer: Ọhụụ Kami
O nweghi ihe jikọrọ ya na iji ngwaọrụ nwere ngwa dakọtara ma ọ bụ jiri ya na ngwa emere site na maka akụrụngwa anyị ji. Ahụmịhe onye ọrụ zuru ezu na karịa afọ ojuju niile, ma na-eme anyị jiri uru niile rite uru nke ahụ na-enye.
Dị ka ngwaahịa niile YI nke anyị nwere ihu ọma ịnwale, YI Home Camera nwekwara ngwa nke aka ya. N'okwu a, ọ bụ otu ngwa ahụ ezubere maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwefoto niile nke ndị nrụpụta a nyere. Ma ọ bụ isi ihe dị iche na ịdị mma nke na-ejikwa dị iche na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na anyị ebudata ngwa ahụ, dakọtara maka ngwaọrụ gam akporo yana maka iOS, anyị nwere ike iji igwefoto ozugbo. Anyị kwesịrị ijikọ igwefoto na nke ugbu a, na ndị a ga-amụnye. Site na nkwuputa ụda anyị ga-anụ olu na-ekwu (na Bekee) na-eche njikọ na ọ bụ mgbe ahụ ka anyị ga-aga n'ihu na njikọ ahụ.
Iji jikọọ ha na netwọk wifi anyị, ngwa ahụ n'onwe ya ga-ewepụta koodu QR na anyị ga-edebe n'ihu igwefoto ka ha wee gụọ ya. Ozugbo amatara koodu ahụ, ese foto jikọọ na netwọk anyị na akpaghị aka. Ma n'oge anyị nwere ike ịhụ na oge, site na ngwa, ihe niile igwefoto na-edekọ, dị mfe!
Developer: YI Teknụzụ, Inc.
Uru na ọghọm nke Igwefoto Yilọ Yi
Anyị nwere mmasị na gị minimalist, ọtọ na nnọọ oge a na imewe nke ahụ ga-adaba n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ ahụ.
na ihe eji eme ulo Ha na-enye mma na iguzogide ka ha wee nọgide na-eji ma ghara ịda site na ọdịda ma ọ bụ ọkpọ.
La n’abali awade a ojiji nke ojiji maka ụlọ ma ọ bụ azụmahịa onyunyo.
El bi-directional audio na-eme ka anyị nwee ike ịmekọrịta site na igwefoto n'ebe ọ bụla.
Ihe enweghị batrị nke gị Ọ na-egbochi ebe echichi na ogologo nke eriri ma ọ bụ nso na plọg.
O nweghi ebe nchekwa di n’ime ya, Ọ bụ ezie na a na-edozi ya na oghere kaadi Micro USB.
O nweghị ebe nchekwa dị n’ime ya
Igwefoto Igwe Nke a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Yi 1080p Home Igwefoto Review
Egwuregwu asaa kacha mma maka ekwentị ma ọ bụ mbadamba
Otu esi choo Google site na onyonyo